Ugeqa amagula ngokuhlangana neSilo - Ilanga News
Home Izindaba Ugeqa amagula ngokuhlangana neSilo
Ugeqa amagula ngokuhlangana neSilo
Ngumngani womndeni owaba yisisusa sendaba
UGEQE amagula ngokuhlangana kwakhe ne- Silo uMisuzulu ka Zwelithini (uMdlokombana), kaBhekuzulu, undlunkulu wesibili wesizwe, uNozizwe Mulela ngesikhathi enengxoxo ekhethekile neLANGA ngoLwesibili esigodlweni Kwa Khangelamankengane, KwaNongoma.
Utshele ILANGA ukuthi empeleni unesikhathi eside azana neSilo, kangangoba isidlulile iminyakeni eyishumi baqala ukuba nobudlelwano.
Uthe yize wayazi ukuthi iSilo sizalwa ebukhosini, kodwa wayengakaze azitshele ukuthi ngelinye ilanga siyoke sibe sesihlalweni ngoba kwasona sasingayiphathi leyo. “Sahlangana khona eSwazini, njengoba naso (iSilo) sakhulela khona, okuyilapho kuzalwa khona undlunkulu osizalayo (iNdlovukazi Mantfombi, uMaDlamini). “Sahlanganiswa ngumngani womndeni, oyisihlobo seSilo. “Saqala saxoxa kwaze kwaholela ekutheni sibe nobudlelwano,” kusho uNdlunkulu Mulela.
Uthi into ayiqaphela ngeSilo sisengumntwana ngaleso sikhathi wukuzithoba. “Ngokujwayelekile, umuntu osezingeni leSilo (uMisuzulu)
ozalwa ebukhosini kuvame ukuthi aphakame. ISilo sinomoya phansi, siyakwazi ukulalela omunye umuntu, okuyinto engangingayilindele. Indlela ebesiphila ngayo, wawungeke usho ukuthi sizalwa ebukhosini, besiphila njengathi esingelutho, sixoxa
nabo bonke abantu. “Sasiwufunda umlando wamaZulu esikoleni samabanga aphezulu, ngangazi nge Silo (uMisuzulu), iSilo esikhotheme (uMdlokombana) nomntanenkosi (uNdlunkulu uMantfombi), nganginazo ngisho izinkulumo eziqoshiwe zeSilo (uMdlokombana), engangizilalela.
Ngakhoke ngesikhathi ngihlangana neSilo (uMisuzulu), ngangazi ngaso nokuthi sizalwa kuphi,” kusho undlunkulu. Uveze ukuthi uke wahlangana neNdlovukazi uMantfombi, kodwa akalitholanga ithuba lokuhlangana noMdlokombana, kwaze kuba uyakhothama mhla ka12 kuNdasa (March) nyakenye. Uchaze u-2021 njengonyaka owabanezinguquko ngokuphazima kweso kuyena empilweni yakhe neSilo uMisuzulu njengoba bobabili bashonelwa ngabazali babo. “Kwahamba iSilo noMntanenkosi, nami kwashona umama.
“Kusenjalo, kwamenyezelwa ukuthi (uMntwana uMisuzulu) useyiSilo. “Ngaleso sikhathi kwakumele umuntu amukele ukuthi kunezinguquko, impilo nobudlelwano bethu ngeke kusafana nasekuqaleni, kunezinto ezazidinga yena njengeSilo, okwakumele abhekane nazo. “Yize kunjalo, sisaba naso isikhathi sethu, siyaxoxa noma kungasafani nasekuqaleni ngoba isikhathi esiningi kusuke kukhona abantu, njengonogada, kodwa ukuziphatha kusafana nakuqala, yikho nje ukuthi kasisabonani njengendlela esasibonana ngayo.
Sinezinto esibhekene nazo, okumele sizenze, kodwake yizinguquko lezo okumele sizamukele futhi sifunde ukuphila nazo,” kusho undlunkulu. Uthe yize wayekhona kutshalwa iNdlovukazi Mantfombi, wahamba emuva kwenkonzo yesikhumbuzo, kodwa konke
okwenzeka wayekubuka kumabonakude, kuhlanganisa nezinxushunxushu ezasuka kumenyezelwa igama lomyeni wakhe (njengeSilo). Uthi impilo ishintshile manje njengoba ngisho nakwabo besahluleka wukumbiza ngondlunkulu, naye sekunemigomo okumele ayilandele njengomama wesizwe.
“Kwabakhaya nakubangani bami, kusenzima ukujwayela ushintsho njengoba kwesinye isikhathi sekumele baguqe uma bekhuluma nami. “Umzala wami nje, usanda kusho ukuthi akukajwayeleki ukungibiza ngondlunkulu ngoba ekhaya bajwayele ukungibiza ngo- Zizwe, kanti abangani bajwayele elikaNoz,” kusho yena. Mayelana nokugana esithenjini, uthe uyazi ngaso ngoba uzalelwe eSwazini, maningi amasiko akhona afanayo nawaKwaZulu. “Ngiqhamuka ezweni elinenkosi, indlovukazi namazinyane futhi ngiyazi ukuthi kumele uziphathe kanjani phambi kwabo,” kusho undlunkulu.
Uthi uzizwa amukeleke kakhulu emndenini njengoba odadewabo beSilo uMisuzulu bemamukele ngothando futhi banesikhathi bazana.
Sekuwumlando ukuthi wonke amaginxiginxi abehambisana nombango wesihlalo sobukhosi asenqotshiwe njengoba iSilo
uMisuzulu sesivunywe nanguMengameli Cyril Ramaphosa. Sekulindwe usuku lokuthi sigcotshwe ngokwesiko ukuze sihlale ngokusemthethweni esihlalweni “esakhiwa” yiSilo uShaka ka- Senzangakhona, iLembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha.
Previous articleBafuna imicimbi yeziqu emanyuvesi
Next articleIsiphepho sidlule nemiphefumulo eBulwer